एक्शनमा उत्रिए ओली सरकार, यी मन्त्रीहरुको पद चट हुने सम्भावना ! - Sidha News
एक्शनमा उत्रिए ओली सरकार, यी मन्त्रीहरुको पद चट हुने सम्भावना !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । यसअगाडी असोज १३ गते नै ताजा समाचारमा सरकारले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
आज बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डलाई) बर्खास्त्री पर्ने भनेर ८ जना मन्त्रीको नाम पढेर सुनाएका थिए । ८ जनाको नाम सुनेपछि प्रचण्डले यस विषयमा फेरी सोच्नुहोस भनेपछि २ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर ६ जना वर्खास्त गर्न सकिने कुरामा दुवै अध्ययद्वयहरु राजी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु मात्रिका यादव, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, बिना मगर, युवराज खतिवडा, चक्रपाणी खनाल, शक्ति बस्नेत र रघुबीर महासेठको नाम पढेर सुनाएका थिए । तर, प्रचण्डले केही मन्त्रीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, वर्तमान सरकारमा रहेका मन्त्रीमध्ये उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चाहिँ अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित रहिरहने छन्। साविक एमालेबाट मन्त्री भएकामध्ये उपप्रधामन्त्री पोखरेललाई अर्थ वा भौतिक योजना वा गृह मन्त्रालयमध्ये एकको जिम्मेवारी दिने संभावना रहेको स्रोतको दाबी छ। अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने बर्खास्तमा पर्न सक्नेछन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइने संभावना छ। यदि ईश्वर पोखरेललाई अर्थमन्त्री बनाइयो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी पाण्डेलाई दिइने भएको छ। साउन १५ गते मात्र मन्त्री भएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई हटाइने छैन भने एक वर्षअघि मन्त्री भएका कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि कायमै रहने संभावना रहेको उक्त स्रोतको भनाइ छ।
सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्त फितलो भएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओली सक्षम नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने टुंगोमा पुगेका छन्। त्यसैले उनी विगतमा सक्षम सावित भएका पूर्वमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मालाई मन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।